The Arakan International - English Section
Another Point of View on Camel's Story
By Kaung Myat San
This isastory that I read when I was high school days.
Once,aCamel startedajourney. He carriedabundle of straw for his food on his way to journey. It seemed to me that he consumed some of the straw along the way.
En route, the remaining straw became heavier and heavier as he crossedariver. Weighted by the wet straw, he did not continue his journey any longer. And then he threw it. After that, “Well, now I feel very light and comfortable by throwing this burden!", he remarked.
In fact, he carried that bundle of straw as his ration or food. He threw it because it became heavier by wetting with water, and he was unable to continue his journey. Not because it is useless but because it is very hard to go on by carrying that heavy item.
We can consider in another way. If he wanted to carry it in necessity, he could wait and make it dry under the sunshine.
However, it could be delay to reach his setting destination by doing all these.
Our life is made up of time?
I think the situation, like river, changed his ration into burden, the useful thing into trash.
In the same way, along the journey of our life, there are many things to throw or leave or abandon what we brought in the beginning until we arrive at our setting destination. They will be some ideas, works, chances and opportunities.
The reason why we should have to throw or leave is not that all these things are useless. It is because taking risk and giving sacrifices are unavoidable things to get what we want and what we want to be.
In business, “Big risk, big benefit” is well-known. There will be no successful business neither taking risks nor giving sacrifices. Similarity, there is no way to get achievement our goals in life either taking risks or giving sacrifices.
We consume and grasp ideas, thoughts, concepts and opportunities in different ages and stages in all the walks of life.
Day by day, we should have to throw what we grasp and what we consume (ideas, thoughts, concepts and opportunities) in connection with our ages and experiences,
It is sure that there will be many things to throw or abandon. Asaresult, there will be some collections after crossing rivers of life, one after another.
But, it is not easy to make decision what to throw and what to hold in our daily life.
It is impossible to grasp all the things. We should have to have courage to makeachoice;
“Throw, Or Hold”.
To reach our destination, we should to take the compulsory and the necessity.
Nevertheless, everyone needs to throw or abandon or leave something on the way of his life journey to get the setting goals or destinations.
DARE TO THROW SOMETHING!
English - Arakanese နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရအဘိဓါန် (၄)
Agitation: နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဖေါထားတရပ်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်မှုတရပ်အတွက်သော်လည်းကောင်း အများပြည်သူရှိမှောက်တွင်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ လှုပ်သျှားတက်ကြွဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး။ ဉပမာ၁၉၈၀ပြည့်လွန်နှောင်းပိုင်းနှစ်များတွင် တရုတ်ပြည်၌ဖြစ်ပွါး၊ ပေါ်ပေါက်ခသည့်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများ။
Agrarian: ပထဝီမြီပြင်နှင့်ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရသည့်ကိစ္စရပ်များ။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာ။
Alien: နိုင်ငံရပ်ခြားမှလာရောက်သူ။ တိုင်းတပါးသား။ အခြားကမBာမှလာရောက်သူ။
Allegiance: မူဝါဒတခုခုအပေါ် (သို့မဟုတ်) ဂေါင်းဆောင်တဉီးဉီးအပေါ် (သို့မဟုတ်)တိုင်းနိုင်ငံတခုခုအပေါ်သစ္စာဟိခြင်း၊သစ္စာပြုထမ်းရွက်ခြင်း။
Alliance: (ပြည်တွင်းတွင်ဖြစ်စီ၊ပြည်ပတွင်ဖြစ်စီ) နှစ်ဉီးနှစ်ဖက်အကျိုးတူ၊ ရည်မှန်းချက်တူသည့် အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း၊ တိုင်းပြည်နိုင်ငံများအချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဉပမာ ပထမကမBာစစ်၊ ဒုတိယကမBာစစ်များအတွင်းတွင် ဉီးတည်ချက်တူရာနိုင်ငံများ အချင်းချင်းပူးပေါင်း၍ စစ်ရေးဆင်နွဲခြင်းမျိုး။
Altruism: ကိုယ်ကျိုးမဖက်ပဲ အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
Ambassador: နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်မိမိရို့၏သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအတွက် ကိုယ်စားပြုဆောင်ရွက်ရသော သံတမန်အဖွဲ့အစည်း၏အဆင့်မြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုသံတမန်အဖွဲ့၏အကြီးအကဲ။
Amendment: (နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြီခံဉပဒေတွင်)ပြင်ဆင်ချက်။ နိုင်ငံတခု၏ မူလဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြီခံဉပဒေတွင် အချိန်ကာလနှင့် အခြေအနေအားလျှော်စွာလိုအပ်သည့်အခန်းကဏ္ဍများကိုလိုအပ်သည့်အလျှောက်(နိုင်ငံဉပဒေပြုအာဏာပိုင်များမှ)ထည့်သွင်းခြင်း၊အစားထိုးခြင်း၊ထုတ်ပယ်ခြင်း စသည့်ပြင်ဆင်ချက်များ။
Amnesty: လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်။ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအတိုက်အခံပြုသူများ၊ပြစ်မှုဖြင့်ပြစ်ဒဏ်ကျခံနိန်ရသူများကို အထူးအကြောင်းကိစ္စတစုံတရာအပေါ်အခြီပြုလျှက် ပြစ်ဒဏ်မှကင်းလွှတ်ခွင့်ပြုခြင်း။
English - Arakanese နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရအဘိဓါန် (၃)
Administration: အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့။ အစိုးရ၏ မူဝါဒများ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စအဝ၀ကို စီမံခန့်ခွဲသည့် အဖွဲ့၊ အုပ်စု။ ဉပမာObama administration (အိုဘားမားအစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့)၊ Clinton administration (ကလိန်တန်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့)၊
Adversary system: အဆိုနှင့်အချေ ဖက်နှစ်ဖက်ထား၍ တင်သွင်း၊ ငြင်းပါယ်၊ ချေပခြင်းများဖြင့် အမှန်ဆုံး (သို့မဟုတ်) အသင့်တော်ဆုံး အခြေအနေတရပ်ကို ဆုံးဖြတ်ချမှတ်မှု ပြုလုပ်သည့် (အစိုးရ) စနစ်။ အမေရီကန်နှင့် ဂရိတ်ဗြီတိန်နိုင်ငံများသည် အေစနစ်ကို ချမှတ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများ ဖြစ်ကတ်ပါသည်။
Aegis: လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ဆောင်မှု လွယ်ကူစီရန်ထောက်ပံ့၊ ကာကွယ်ပီးသည့် အာဏာ (သို့မဟုတ်) စွမ်းအားပြည့် အဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်။ ဉပမာအားဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်သူများအနိန်ဖြင့် ကမBာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ Aegis (အထောက်အပံ့၊အကာအကွယ်) ကိုယူ၍ လုပ်ဆောင်ကတ်ရခြင်း၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်ထောက်ပံ့မှုကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီအဖွဲ့၏ Aegis ကိုခံယူ၍ လုပ်ဆောင်ကတ်ရခြင်းမျိုးကို ဆိုလိုပါသည်။
Affidavit: ကျမ်းကျိန်၍ ထုတ်ပြန်ကြော်ငြာမှု ပြုလုပ်ခြင်း။ ကျမ်းကျိန်ခြင်း။ တရားဝင်၍လေးနက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်မှုပြုခြင်း။
Affluence:ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဖြင့် လှုပ်ရှားကူးခတ်နှိုင်စွမ်းဟိခြင်း၊ (ဖေသာဟိသဖြင့်သြဇာညောင်းခြင်းမျိုး)။
Affluent: ချမ်းသာသော။ အိမ်သုံး၊ လူသုံး၊ စားသုံးကုန်စည်များပေါကြွယ်ဝလှသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော။ Affluent စကားလုံးကို အမေရီကန်စီးပွါးရေးပညာသျှင် John Kenneth Galbraith က ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် စတင်သုံးစွဲရာမှ အသုံးတွင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမေရီကန်နှင့် အခြားကုံလုံသည့် အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းများကို ရည်ညွှန်းလျှက် သုံးစွဲကတ်ပါသည်။
Agenda: လုပ်ငန်း၊ အစီအမံ တစုံတရာ ပြီးမြောက်ရန် (သို့မဟုတ်) အထမြောက်ရန် လိုအပ်သည်များ။ ဉပမာ အစည်းအဝေးတခု၏ Agenda သည် ၄င်းအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးကတ်မည့် အစီအစဉ်များ၊ ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို ရည်ညွှန်း၊ ခြုံငုံခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ အမေရီကန်နိုင်ငံရေးလောက၌ Democratic Agenda (ဒီမိုခရက်ထိခ်ပါတီမှ တင်သွင်းဆွေးနွေးမည့် အချက်အလက်များ၊ မူဝါဒများ၊ ကျင့်သုံးလားမည့် ဉပဒေပြုဆိုင်ရာများ စသည်)၊ Republican Agenda (ရီဖါဗလီခိန်ပါတီမှ တင်သွင်းဆွေးနွေးမည့် အချက်အလက်များ ၊မူဝါဒများ ၊ကျင့်သုံးလားမည့်ဉပဒေပြုဆိုင်ရာများ) စသည်ဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲကတ်ပါသည်။
Aggregate demand : စီးပွါးရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု စုစုပေါင်းဝယ်လိုအား။
Aggregate supply : စီးပွါးရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှု စုစုပေါင်းရောင်းလိုအား။
Aggression : တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံတခုခုမှ အခြားတိုင်းပြည်နိုင်ငံတခုခုအပေါ် ရန်လိုသည့်၊ မထီမဲ့မြင်ပြုလိုသည့် အပြုအမူ (သို့မဟုတ်) လုပ်ဆောင်မှု။ ဉပမာအားဖြင့် ၁၇၈၄ ခုနှစ်တွင် ဗမာပြည်က ရခိုင်ပြည်ကို အလုံးအရင်းနှင့်ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမျိုး၊ ၁၉၉၀ ခုနှစ်က အီရတ်နိုင်ငံမှ ကူဝိတ်သို့ စစ်အင်အားအလုံးအရင်းနှင့် ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမျိုး။
English - Arakanese နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရအဘိဓါန် (၂)
Affirmative Action: အတိတ်က ခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံရသည့်အတွက် မျိုးဆက်နှင့်ချီ၍ ဆုံးရှုံးနစ်နာကတ်ရမှုများအတွက် လူမျိုးတစ်မျိုး (သို့မဟုတ်) လူအုပ်စုတစ်စု အပေါ် အထူးအကျိုးခံစားခွင့်များ ပြန်လည်ပီးအပ်ခြင်း။
Alienation: ရိုးရိုးသာမာန်ပြည်သူများအနိန်ဖြင့် နိုင်ငံရေးရာများတွင် ပါဝင်ပါက်သက်ဆောင်ရွက်သော်လည်း ထိရောက်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အဓိပ္ပါယ် ဟိသည့်နောက်ဆက်တွဲရလဒ်များ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် မဟိမှုအပေါ် သူရို့၏ (ဘေးထွက်နိန်ရသျှောင်မျိုး) ခံစားရမှုများ။
American conservatism: ချမ်းသာမှု၊ လုံခြုံမှု နှင့် အစဉ်အလာတန်ဖိုးများအပေါ် အခြားတန်ဖိုးများထက် ပိုမိုအလေးထားသည့်အမေရီကန်ရို့၏ အယူဝါဒ။
American liberalism: လူတယောက်ချင်းစီ၏ လွတ်လပ်မှု၊ တန်းတူညီမျှမှု နှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများအပေါ် အခြားတန်ဖိုးများထက် ပိုမိုအလေးထား သည့် အမေရီကန်ရို့၏ အယူဝါဒ။
American Revolution: (၁၇၇၅ - ၁၇၈၃) အမေရီကန်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲဟူ၍လည်းကောင်း၊ အမေရီကန်တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲဟူ၍ လည်းကောင်းခေါ်ဝါသမုတ် ကတ်သည့် အမေရိကန်ရို့၏မူလကိုလိုနီ ၁၃ ပြည်နယ်အား ဗြိတိသှ်ျအုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှအဆုံးသတ်စီရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသည့် ၁၇၈၇-၁၇၈၉ ကာလများကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ (အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကာလကို ပုံမှန်အားဖြင့် အမေရိကန်လွတ်လပ်ရေးကြော်ငြာစာတမ်းထုတ်ပြန်ခသည့် ၁၇၇၆ ခုနှစ်မှ စတင်တွက်ချက် မှုပြုကတ်ပါသည်။)
Achilles’ heel: အဓိကအားနည်းချက်၊ ပျော့ကွက်၊ ဟာကွက်။ ဂရိသူရဲကောင်းအာ့ခိလိ၏ဒဏ်ဒါရီ (ဖေါင့်အပြောင်းမှာ စာလုံးပေါင်းတိပြောင်းလို့ ဒေသျှောင်မျိုး ရီးရစွာကိုနားလည်ပီးကတ်ပါရန်။)ဆန်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံ၍ပေါ်ပေါက်လာသောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်အရသူရဲကောင်းအာ့ခိလိ၏ ခနြွာကိုယ်၌မည်သည့်နေရာကိုပင်ခွပ်သည်ဖြစ်စီ၊ထိုးသည်ဖြစ်စီတခုလည်းဖြစ်မလားပါ၊ဗဇောင်ကြောင့်ဆိုသော်သူ့အသက်၏တည်နေရာသည်သူ၏ခြီဖနောင့်တွင် ဟိနိန်၍ဟုဆိုပါသည်။စစ်ပွဲတိုင်းအနိုင်ရသောအာ့ခိလိသည်ထရိုဂျန်စစ်ပွဲ၌သူ့ခြီဖနောင့်ဒဏ်ရာကြောင့်ပင်သီဆုံးလားလီသည်။ထိုကြောင့်ကမBာ့နိုင်ငံရေးလောက တွင်တစုံတယောက်(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းတခုခု၏အဓိကပျော့ကွက်၊ဟာကွက်၊အားနည်းချက်ကို (Achilles’ hell) ‘အာ့ခိလိဖနောင့်’ ဟုခေါ်စမှတ်ပြုကတ်ပါ သည်။
Acid test: တစုံတယောက်(သို့မဟုတ်)အဖွဲ့အစည်းတခု(သို့မဟုတ်)ကုမ္ပဏီတခု၏တန်ဖိုးအပေါ်၊ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာအပေါ်၊ ခံနှိုင်ရည်ဟိမှုအပေါ်ဖိအားများစွာ၊ နည်း လမ်းမျိုးစုံဖြင့်စမ်းသပ်ခံရမှု။ ဉပမာအားဖြင့်ရွီးကောက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အတွက်ရွီးကောက်ပွဲကာလသည်ဖိအားများစွာဖြင့်စမ်းသပ်ခံကာလဖြစ်ပါ သည်။ကုမ္ပဏီတခုအတွက်သူ့ကြွီးမြီများကိုအချိန်မှီပြန်ဆပ်ရေး၊ပြန်ထယ်ရေးကာလများသည် ဗခငိ အနျအ ကာလများပင်ဖြစ်ပါသည်။
Activism: နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်(တနည်းနည်းဖြင့်)ပါဝင်ပါက်သက်မှု၊လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှု။ ဉပမာအားဖြင့်နိုင်ငံရေးရုံးတရုံးဖွင့်လှစ်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊သ ပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမျိုး။ပြည်သူလူထု၏ ‘သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလှုပ်သျှားမှုများ’၊ ‘တိရစြွာန်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ လှုပ်သျှားမှုများ’ စသည်များကိုလည်း ရည်ညွှန်းခေါ်ဆိုလေ့ဟိကတ်ပါသည်။
English - Arakanese နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဝေါဟာရအဘိဓါန် (၁)
ABC war : လူသူအဆောက်အအုံများ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သီကြီ ပျက်စီးစီနိုင်လောက်သည့်စွမ်းအားကြီး အဖျက်လက်နက်များ ( WMD အထူးသဖြင့် အနုမြူ၊ ဘိုင်အို အစဟိသည့် ဓါတုလက်နက်များ)အသုံးပြုလျှက် တိုက်ခိုက်သည့် စစ်ပွဲအမျိုးအစားအတွက် နိုင်ငံရေးလောကတွင်ယေဘူယျသုံးနှုန်းသည့် အသုံးအနှုံး။
Abdication : ဘုရင် (သို့မဟုတ်) ဘုရင်မတဉီးဉီးမှ မိမိသဖေါဆန္ဒအလျှေုာက် နန်းစွန့်ခြင်း။ (မကြာခင်ကာလများအတွင်းက ကမBာ့သမိုင်း၏ ထင်သျှားသော နန်းစွန့်မှုတခုမှာ အင်္ဂလန်၏ အဌမမြောက် အက်ဒွါ့ဘုရင်၏ နန်းစွန့်မှုဖြစ်သည်။ အမေရီကန်တလင်ကွာတဉီးဖြစ်သည့် ဝေလီဆိမ်ပ်ဆွင် ကို အဆိုပါဘုရင်က လက်ထပ်ရန်ကြံစည်သောအခါ အင်္ဂလန်ထီးနန်းထုံးစံအရခွင့်မပြုသဖြင့် နန်းစွန့်လားခြင်းဖြစ်သည်။)
Abrogation : ဉပဒေ (သို့မဟုတ်) စာချုပ် (သို့မဟုတ်) သဖေါတူညီမှု တခုခုအား တဖက်သတ်ဖြစ်စီ၊ နှစ်ဉီးနှစ်ဖက်သဖေါတူညီမှုဖြင့်ဖြစ်စီ ပြန်လည်ဖျက်သိမ်းခြင်း။
Absolutism : လုံးဝဉဿုံ(အုပ်စိုးသည့်)အစိုးရ။ နိုင်ငံတော်၏ အာဏာအရပ်ရပ်သည် (အာဏာသျှင်များကဲသို့) လူပုဂ္ဂိုလ်တဉီးတယောက်အပေါ်၌တည်မှီခြင်း (သို့မဟုတ်) ရုံးအဖွဲ့အစည်းတရပ်တည်းအပေါ်၌တည်မှီခြင်း။
Academic freedom : တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတဉီးဉီးသည် သူ၏သုတေသနပြုလေ့လာတွိဟိချက်တရပ်ရပ်အား အများလက်ခံသဖေါတူနိုင်သည်ဖြစ်စီ၊ အငြင်းပွါး စရာပင်ဖြစ်စီ အဆိုပါ သုတေသီအပေါ် မည်သည့်ဖိအားတစုံတရာမဟိစီပဲ လွတ်လပ်စွာ ရီးသား၊ ထုတ်ဝီ၊ ဖြန့်ချီပိုင်ခွင့်။
Accidental war : အချက်အလက်များလွဲမှားစွာတွက်ချက်မှု (သို့မဟုတ်) အခြားမှားယွင်းမှုတစုံတရာကြောင့် ကြိုတင်ကြံရွယ်မှုမဟိပဲ တိုက်ခိုက်ဖြစ်ပွါး သည့် ခေတ်သစ်စစ်ပွဲ။
Accord: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် စာချုပ်တရပ်ကဲသို့ခိုင်မာမှုမဟိပဲ သံတမန်နည်းလမ်းအရသဖေါတူညီမှု။ တခါတလီတွင် အေသဖေါတူညီမှုများ သည်လည်း စာချုပ်စာတမ်းကဲသို့ခိုင်မာသောအဆင့်အနိန်အထားတွင်ဟိတတ်ပါသည်။ ဉပမာအားဖြင့် ၁၉၇၈ ခုနှစ်အတွင်းက အီဂျိ နှင့် အိဇရေးလ် ရို့ကြား တွင်ပြုလုပ်ခသည့် ဒေးဗိစခန်း(Camp David) သဖေါတူညီမှု၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်းကပြုလုပ်ခကတ်သည့် အိဇရေးလ် နှင့် ဂျော်ဒန်ရို့အကြားသဖေါတူညီမှု။
Accountability : တာဝန်ဝတ္တရားဟိမှု ၊ တာဝန်ဝတ္တရားထိန်းသိမ်းမှု။ လူမှုကိစ္စ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ဟိတတ်သည့် တာဝန်ဝတ္တရားများအတိုင်းထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်မှု။ ဉပမာအားဖြင့် အလုပ်သမားသည် သူ၏လုပ်ငန်းတာဝန်ဝတ္တရားများအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမှု၊ (ဒီမိုခရေစီနိုင်ငံများ၌) ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် တဉီးဉီးသည် အများပြည်သူအပေါ် သူကတိကဝတ်ပြုဖူးသည့်အတိုင်းတာဝန်ဝတ္တရားကျီစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရမှု၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် သူ၏ပြည်သူ လူထုအားလုံးအပေါ် တာဝန်ဝတ္တရားကျီပြွန်စွာဖြင့်နိုင်ငံတော်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်ရမှုမျိုးများကို ဆိုလိုပါသည်။
Acculturation :မိမိရို့လူမျိုးစုပိုင် (သို့မဟုတ်) မိမိရို့၏မိရိုးဖလာယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပဲ အခြားသူများ၏ယဉ်ကျေးမှုတရပ်ရပ်အား အတုယူပြုမူဆောင်ရွက်ခြင်း။
Act of state : နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ။ နိုင်ငံအစိုးရမှအပ အခြားမည်သည့် ပုဂ္ဂလိကမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်မဟိသည့်လုပ်ငန်းကိစ္စမျိုး။
Once, I wroteapoem aboutabird.
A bird who could fly into the cloudy sky with only one swing, which will take onlyafew seconds.
A bird who also possessed many other amazing qualities, such as courage, kindness, empathy, sympathy, strong spirit and energetic body.
However, the key sorrowful problem was that the bird was inside the cage. In other words, because of that hindered condition, all greatest qualities of the bird simply become useless or almost meaningless!
How many countries are smaller than Arakan?
The Hold and The Freedom
A few weeks ago, I went toapark with my children. One of my daughters had grape-tomatoes in her hands and the other one was holding her little toys. The problem was that they both could not be able to climb or play around in the park because their hands were not free.
Then, I remember one of the Buddha’s examples about - how our own holds make us to be away from freedom. Instead, they become our self-hinder.
A New English Word: FAID
One of prime ministers in Europe was sent to the court because of accusation that he had sex withateen prostitute, recently. A minister resigned from the office because of taking bribe forafew hundred dollars from an immigrant in Japan. One of high authorities in China ran away after he stole millions of money of peoples. Almost everyday, we do things we should not do or are not supposed to do. Sometimes, we do those things intently, consciously and thoughtfully but sometimes, we do those things unexpectedly, unconsciously and thoughtlessly. That means for some reasons, we knew something was inappropriate or unjust to do/say/act before we did, but we did it anyway. Why? In this piece of writing, we will learn four lessons that come from the Buddha’s teachings, which will help us, understand the prime reasons why we are doing wrong, inappropriate or unjust things.